EN45545 HL2 Shahaadada Aluminium ee malabka aluminium ee loo yaqaan 'tareenka' Shiinaha, Shiinaha
EN45545 HL2 guddi isku-dhaf ah oo leh aluminium malab-soo-saar ah oo tareen ah
HPL (lakabka sare ee lakabka) malabka waa malab sandwich ah oo kuxiran walxaha lakabka lakabka lakabka sare iyo gudaha malabka aluminium. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhismaha maraakiibta iyo tareenka.
Panels Qalabka malab-wadareedka HPL ayaa si gaar ah loogu adeegsadaa derbiyada, qeybaha, albaabada, qalabka guryaha iyo saqafka dhismaha maraakiibta & qurxinta tareenka.
Midabbo kala duwan iyo qaab-dhismeed ayaa la heli karaa iyadoo loo eegayo baahidaada gaarka ah.
Qaab dhismeedka guddiga:
HPL + xaashida aluminium + udub-dhexaadka malabka aluminium + xaashida aluminium + HPL
Aluminiyo alwaax malab leh oo lagu kariyey tareenka, baska, dariiqa dabaqa maraakiibta